Ukubukwa kwezilwane e-Sun City - Izilwane eSun City
Ukubukwa kwezilwane e-Sun City
Izilwane eSun City
I-Sun City Resort iphezu kwePilanesberg National Park. Izivakashi zingakujabulela ukubukwa kwegeyimu ye-Big Five ePark, futhi ubone ezinye eziningi ezindaweni ezingcwele.
Izinto ezihambisana nokubuka Izilwane
I-Sun City Resort ephethelweni lwePilanesberg National Park kanye nezivakashi zingakwazi ukuhamba emigwaqweni yokugijima egijima ePark ukuze ubone izilwane zasendle. Kodwa-ke, kunezinto eziningi ezikhangayo ezitholakala ngaphakathi kwehhotela. I-Garden Cascades ineziteleka eziningi lapho izivakashi zibona khona izinyoni zezinyoni zendabuko nezinhlobonhlobo. Izivakashi zingabheka izinyoni zezilwane ezinjengezinkukhu ezondliwa nsuku zonke ezindizeni zezilwane.
Izivakashi zingaya eholidini le-Kwena Gardens Crocodile Sanctuary, elisemnyango weSun City. Isikhathi esingcono kakhulu sokuhamba sifike ntambama, okuyilapho ama-Crocodiles edla khona. Ukuvakashela i-Butterfly World kuyindlela enhle yokuchitha ntambama. Izivakashi zingabona izinhlobo eziningi zezimvemvane lapho.
Enye yezindlela ezingakhohlwa ukubuka indawo egcinwe emoyeni ngesikhathi sezindiza ezishayela emoyeni ezishisayo. Lokhu kulandelwa yisidlo sasekuseni se-champagne esimnandi.
Izilwane emapulazini azungezayo
I-Pilanesberg National Park ihlanganisa indawo engamahektha angu-55 000 futhi inesimo esiyindilinga esihlanganisa i-crater yakudala ye-volcanic. I-landscape iyimvelo enhle kakhulu, enezibi phakathi nendawo yokuqhoqhobala kwentaba, ejikelezwe izintaba. Ipaki isendaweni yenguquko phakathi kwezinto eziphilayo ze-Kalahari kanye ne-Lowveld, futhi zonke izinhlobo zezitshalo zikhona. Izivakashi ze-Sun City ziqoqiwe kusukela eholidini ukuze zivakashele ePark, okuyindlela encane yokuhamba bese ibuya futhi ekupheleni komsebenzi.
Izivakashi ziyoba nethuba lokubona izilwane zasendle ezihamba phambili zendawo, kubandakanya i-Big Five - Elephant, Lion, Buffalo, Rhino (emhlophe neyomnyama) kanye neLeopard ejwayelekile. Ezinye izilwane izivakashi ezingabona zihlanganisa i-Zebra, i-Hyena, iJirafi, iHippo ne-Crocodile. Kukhona imini nobusuku okushayela ekunikezeni.
Funda kabanzi mayelana ne-Safari Lodges eduze ne-Sun City ePilanesberg National Park.
Ndiza nge-Hot-air Balloon(amahora amane)
Indiza ithatha cishe imizuzu engu-60, futhi ilandelwa i-champagne kanye kwasekuseni okuphelele.
Lokhu okuhlangenwe nakho akufanele kuphuthelwe - kuyindlela engakukhunjulwa indlela yokubona umdlalo uphinde uhambe phezu kwezwe elithokozelayo elithambile. Ukuhamba ekuseni ekuseni kuqinisekisa ukuthi izivakashi zibona izibhakabhaka ezimnandi zasekuseni nezilwane zasendle ngezansi. Izilwane zasendle zisebenza kakhulu ngesikhathi samahora apholile. Kukhona i-champagne nekuseni kwasekuseni okukhethiweyo okufanele ujabule ngemva kwendiza.
ukushayela (amahora amabili kuya kumathathu)
Usuku nobusuku kushayela. Izimoto zangasese zamaqembu zingahlelwe.
Izivakashi zingaya emotweni yemidlalo eqondisiwe ePilanesberg National Park. Bayothathwa ehhotela labo ngumqondisi onolwazi oyokusiza ukulandelela phansi izifunda eziningi eziphilayo zasendle, njenge-Big Five.
Imisebenzi yemidlalo kanye ne-safaris enikezwa yi-Sun City Resort ingahle ibhaliswe yi-Siyabona Africa Destination Specialist Yonke inkambo iphuma futhi ibuyele e-complex complex.